Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMaria Carmen
I-Doña Erlinda de la Herradura Iphupha leTropiki yindlu yaselwandle eqhelekileyo, evulekileyo, ezolileyo, enomgangatho ophantsi. Kuphela umamkeli-ndwendwe, u-Erlinda (ummi waseCuba-waseKhanada) uhlala apho. Ineendawo ezininzi zokuhlala, ezibandakanya iigadi kunye ne-ranchón ejonge emlonyeni wolwandle (ilungele isidlo sakusasa ngaphandle okanye ukonwabela isidlo esimnandi seCreole).
Amagumbi amabini akhululekileyo, axhotyiswe ngayo yonke into onokuyidinga (i-TV, i-air conditioning, inetha zeengcongconi, igumbi lokuhlambela langasese, isomisi seenwele, i-mini bar, ukufikelela ngokuthe ngqo kwigadi, njl.).
Ukupaka: simahla kubathengi
Ukuhlamba impahla: ixabiso eliguquguqukayo (kuxhomekeke kubuninzi kunye nohlobo lwempahla). Kuqoqosho.
Isidlo sakusasa: Isidlo sakusasa esihle kakhulu (uhlobo lwelizwekazi). Kuyacetyiswa ukuba uzigcine kunye nendawo yokuhlala.
Ukutya isidlo sangokuhlwa: I-Creole cuisine (emnandi yaseCuban), eyenziwe ekhaya, esekwe kukutya kwaselwandle kunye neemveliso zonyaka kunye nezentengiso. Izahlulo ezintle kunye nokuhlobisa okuninzi. Okukhethekileyo kwi-langista, i-shrimp kunye nentlanzi.
Ukuba ujonge ukuhlala umzuzu okhethekileyo, unxibelelana ngokuthe ngqo nendalo kunye nolwandle lwethu olumangalisayo, le yeyona ndawo ifanelekileyo.
I-Doña Erlinda de la Herradura Iphupha leTropiki yindlu ekwiPlaya La Herradura, ingozi yendalo entle, emile okwehashe, eyenza ulwandle oluziikhilomitha ezili-12, olukunxweme olusemantla kwingingqi esempuma yeCuba, kwimpuma yeCuba. iphondo Las tuna.
Olu lwandle luhle kakhulu - lunesanti emhlophe ecocekileyo kunye namanzi azolileyo aluhlaza - lunendawo encinci etshintshiweyo, enezityalo ezichulumancisayo, iimangrove ezinkulu, iintlanzi zetropiki kunye nobomi obuninzi obuphantsi kwamanzi, iikreyifishi, oononkala kunye neendidi ezahlukeneyo zeentaka.
ILa Herradura Beach inendawo enomtsalane kakhulu kunye neelwandle ezinyulu, ezifana nePlaya la Genovesa, el Ubero, iPunta Tomate, iPunta Corrella, iLa llanita, iPlaya La Boca, iPuerto Padre Bay ... Kufuphi nawe uya kufumana iSitena seFerry (esithatha ukuba i ngapha bay).
Iikhilomitha ezilishumi elinesibini zolwandle olunyulu, ukutya kwaselwandle okutsha, umoya omtsha, ukuzola okuninzi, iimangrove, indalo kunye nendalo engqongileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Carmen
UErlinda, ummi waseCuba waseKhanada, uyakuthanda ukunxibelelana nendalo. Uyakuthanda ukwenza abahlobo, ukwabelana ngamava, ukwenza iindwendwe zakhe zonwabe, ukupheka nokuhoya isitiya sakhe.